7 Iindlela elula Yenza kuye Tshona Love
ukubuyekezwa: UCanzibe. 23 2019 | 2 min ukufunda
Ngoko uye wabandakanyeka intloko-phezu-izithende umntu, ngoku kuthweni? Amanyathelo ngezantsi elula kuya kumenza kuwa ngakumbi kunawe.
Simple Inyathelo #1: Ubosoloko uncuma
Danyazayo uncumo lokwenene ngokufuthi kangangoko kwenza ujonga uyangeneka. Enoba oku uncumo ibhaso-ngokuphumelela wakho ijolise mfo yakho okanye ngephanyazo ngexesha, smiling kuya kukunceda ukuba ngakumbi nto leyo iza kwenza mfo yakho ufuna ukuchitha ixesha elingakumbi kunye nawe.
incam: Xa usenza ukuqhagamshelana uthando lwakho iliso, ngokucotha uncumo ukusivumela lwavakala kulo lonke ebusweni bakho. Xa uphawula, ngokungakhathali khangela phantsi. Oku kuya kwenza ukuba akhe.
Simple Inyathelo #2: Bonisa Best Wena
Ukutshintsha nabani, singasathethi umntu iresiphi intlekele. Sonke iimpawu ezimangalisayo ubuntu ngoko kutheni bonisa abo? baya kuphela kule kuqhayisa uzithembe kodwa kuya kwenza ukuba kakhulu nomtsalane ngakumbi umntu wakho.
incam: Ngokulula ukwenza iinzame ukukhangeleka kakuhle. Gcina iinwele zakho zicocekile yaye zibiza, ukufumana wevumba utyikityo, kusoloko impefumlo epholileyo, ukunxiba ilipstiki, kwaye uqinisekise ngubo yakho acocekile kwaye silungiselelwe.
Simple Inyathelo #3: Yiba Unbalance
Ukuze abonakale endimangazayo akhe, ufuna kukushiya Indoda leyo yee ngawe.
incam: Ukuba ucela ngebali lakho, umxelele kuphela kuye iinkcukacha ezimbalwa emva koko ndincume ndize ndithi “Eziseleyo sindise ngenxa ngelinye ixesha”. ngokunjalo, kwabathembele kuye qha wena. Xa ithe yenza, Qinisekisa ukuba ukusabela ngoko nangoko. Kuphela uya kuba ecinga ngawe ngexesha lonke kodwa uya kuba gqitha ukuba zikho ezinye izinto ukwenza ngaphezu Doté kuye imini yonke.
Simple Inyathelo #4: Soloko Damn Hayi
Ukushiya umntu wakho efuna okungakumbi kusoloko iyingcamango elungileyo. Ukuba uphelisa incoko phambi kuba lixesha kwaye i yadika, ngoko nangoko uya kukhangela phambili kwixesha elizayo ntetho ezimbini.
incam: Nokuba nto imiyalezo, imeyile, okanye ubuso ngobuso incoko uyeke incoko ngaphambi kokuba kwenzeke cwaka. ngokunjalo, qiniseka ukuba akukho obsessively uqhagamshelane naye. Xa uzenza kufumaneka kakhulu, uya kubonakala limane kakhulu.
Simple Inyathelo #5: unobuqhophololo Flirt
uvuza ezingaqondakaliyo, ngothsuphe besini kuya kumnceda ukuba nentembelo ulwalamano ukuba ezimbini siqalisa.
incam: Sibambeke wondela kuye bevela kulo lonke igumbi, agcine ulwimi umzimba wakho avulekileyo iin- umzimba wakho kuye, kwaye xa kuvela ithuba hlekisa ngaye. ngokunjalo, vumela ukuba bondele twirl iinwele zenu ziyaluma iindevu lakho ukuba uya kumbonisa ukuba uthanda kuye.
Simple Inyathelo #6: Yiba Uyazazi Towards kuye
Bonisa ukuba phawula oko akwenzayo uze ucele uncedo ngaphambi kokuba acele. Ngokugcina intshukumo encinane, nesisa wakho uya kuba ngaphezu ixatyiswe.
incam: Nokuba yena phakathi iprojekthi uyadika okanye ugula, ngokumbonisa ukuba umkhathalele ngokuchitha ixesha naye uya kubonisa ukuba inkxaso kunye nokukhulisa.
Simple Inyathelo #7: Kuba Force Positive ebomini bakhe
Yiba umntu entle phambi kwakhe ngokuba nenjongo vumelanayo Enoba imeko okanye incoko. Kulula kakhulu ukuba kuwa eluthandweni nomntu ophila nentsholongwane kuthelekiswa ngumntu osoloko okhalaza.
incam: Nangona abanye ngakhiyo bekhalaza lungile, zama ukugcina ubomi bakho ezintle kangaka akukhumbula ixesha lakho kunye ezifudumeleyo neafro.
Nangona akunakwenzeka ukuba “enza” nabani na azive ngendlela ethile, ebonisa owakhayo yakho kunye nenkathalo iya kukhuthaza kwaye lizikhuhle iimvakalelo zakhe kwicala lasekunene.
Ngaba Ukuthandana A iboyfriend Boomerang?
© Copyright 2019 Umhla My Pet. yenziwe ngokuthi 8bhubhane Studio